Repositories Cydia folo tokony andramo amin'ny iOS 8.4 | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Cydia, Jailbreak
Ny iOS 8.4 Jailbreak dia mitondra vaovao tsy misy farany, ary napetrak'ireo mpandrindra ny batterie amin'io lafiny io. Saingy reraka matetika isika satria tsy mahita vaovao ampy, fa aza matahotra fa manana vahaolana mora izany. Betsaka ny trano fitahirizana hafa ankoatr'ireo izay efa napetraka mialoha izay ahafahantsika manontany raha mahita fika vaovao sy ny rindranasa izay hahaliana tokoa. Hanome anao ny repository manan-danja indrindra tokony ampiana folo izahay.
Araka ny efa nolazainay, amin'ity lisitra ity dia hampidirinay trano fitahirizana folo izay raha tsy eo amin'ny iPad-nao miaraka amin'ny Jailbreak dia efa aorian'ny famakiana ireo lahatsoratra ireo, ary izany dia satria misy sioka manokana izay tokony hanandramanao ny iPad, ny fahaizany manokana sy ny fampiasa ampiasainy dia tsy misy mitovy.
Chewmieser - http://apt.steverolfe.com - StatusVolX: Izy io dia ahafahantsika manafoana ny fikorontanan'ny volan'ny pop-up ary hanondro ny haavon'ny volavolan-tsolika eo amin'ny bara fisoratana anarana.
Planetin'i Elijah sy Andrew - http://elijahandandrew.com/repo - ReachApp: Efa niresaka zavatra betsaka momba an'ity fanovana ity izahay tao amin'ny iPad News, ity tweak ity dia mitondra multitasking tena marina amin'ny fitaovantsika.
HASHBANG Productions - http://cydia.hbang.ws - Pheromone: Ny zava-drehetra dia azo ampifanarahina amin'ny Jailbreak, ary noho io fanovana io dia afaka manamboatra na dia Cydia aza izahay.
Ian's Repo - http://repo.cydro.us - Fotoana famaranana an'i Cydia.
Ny Repo an'ny mananasy Karen - http://cydia.angelxwind.net - AppSync natambatra: Ilaina tanteraka hahafahana mametraka rindranasa tsy voasonia, izany hoe jiolahin-tsambo. Mahaiza tsara!
Repo an'ny Pw5a29 - http://pw5a29.github.io - Safidy safira vaovao: Manampy anao amin'ny famakiana ilay lahatsoratra amin'ny alàlan'ny fihetsika amin'ny klavier izay tena ilaina tokoa.
Repo nataon'i Ryan Petrich : http://rpetri.ch/repo - Activator: Ilaina tokoa, fifehezana ny iPhone amin'ny alàlan'ny fihetsika, mora, tsotra ary haingana.
repo an'i tateu - http://tateu.net/repo - vAlarm: Io dia ahafahantsika mametraka volavolan-dalàna ho an'ny fanairana tsy miankina amin'ilay ananan'i iPad tamin'izany fotoana izany.
ekipa Kodi - http://mirrors.kodi.tv/apt/ios - Kodi: Ilay mpandimby ny XBMC, ivon-haino aman-jery faratampony misy mpamorona maro ao aoriany.
46 & 2 Repository - http://repo.fortysixandtwo.com - Wink: Mamela antsika hanafina ny bara misy raha tsy te-hahita azy.
Fantatrao izao fa aza mangataka andro manampy ireo tahiry vaovao ao amin'ny loharano Cydia hankafizanao ireo fikajiana mahafinaritra ireo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Repositories Cydia folo tokony hanandrana amin'ny iOS 8.4